Iyo 2012 Mac mini inowira muchikamu chisingachashandi | Ndinobva ku mac
Iyo 2012 Mac mini inowira muchikamu chisingachashandi
Ignatius Room | 03/11/2021 18:00 | Mac Mini, Noticias, Mac makomputa
Zvinoenderana nememorandamu yemukati yeApple Store iyo MacRumors midhiya yakawana, iyo Mac mini ye20212, pamwe ne4th chizvarwa iPad yakapinda muchikamu chezvakasakara zvigadzirwa, kureva, kana ikaputsika, mukati. Apple ichave isina nzira yekuigadzirisa.
Kana isu tikafunga kuti Mac mini kubva ku2012 yaive yekupedzisira modhi yakabvumira kutsiva RAM uye kushandura hard disk yaive nyaya yemaminitsi, zvishoma sezvamunoziva nezvesainzi yekombuta, kana chimwe chezvikamu izvi chikamira kushanda. Hazvizove zvakanyanya kuoma kuzvigadzirisa nekutenga zvikamu.
Iyo Mac mini kubva 2012 yakaunzwa, zviri pachena, muna 2012, kunyanya mumwedzi waGumiguru uye. iri kutengeswa kusvika Gumiguru 2014, payakatsiviwa neMac mini mukupera kwa2014.
Izvi zvaive yekutanga Mac mini munyika yakatanga kuchinja, sezvo yaive yekutanga modhi iyo isingabvumire kuwedzera RAM memory uye kutsiva hard disk ibasa rinotyisa.
Apple inoona mudziyo usingachashandi kana anopfuura makore manomwe apfuura kubvira kekupedzisira payaitengeswa kuburikidza neApple's official chiteshi, iyo mune iyo 2012 Mac mini yaive Gumiguru 2014.
Mac mini 2014 kwechinguva
Kana iwe uine 2014 Mac Mini, une mac kwechinguva kubvira kusvika 2023 haizonzi Vintage, zita rakapihwa kuzvikwata izvo inogona kugadzirwa neAppleKunyangwe Apple inogona kunge isina zvikamu zvinodiwa.
Izvo hazvizove kusvika 2025, apo chigadzirwa ichi chiri inoonekwa sechinyakare. Yeuka kuti Mac Mini 2014 yakanga iri kutengeswa pakati pa2014 na2018, payakagamuchira kugadziridzwa kukuru.
Zvakare, sezvazvaive zviripo kusvika 2018, Apple haizokwanisa kuibvisa kubva pane rondedzero yeMacs. inoenderana neshanduro dzemangwana dzemacOS dzakaburitswa mumakore mashoma anotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Iyo 2012 Mac mini inowira muchikamu chisingachashandi
Mwaka wechitatu weTed Lasso uchatanga kutora firimu pakupera kwaNdira 2022
Apple TV + Inobata "Dickinson" Season XNUMX Preview